उच्च विद्यालय विज्ञान प्रयोग विचारहरू
हाई स्कूल शैक्षिक स्तरमा लक्षित विज्ञान प्रयोगहरूको लागि यी विचारहरू प्रयास गर्नुहोस्। विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन गर्नुहोस् र परीक्षण गर्न विभिन्न अवधारणाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईंले उत्तेजनाको रूपमा कैफीन कार्यहरू सुनेको छ र जब तपाइँ यसको प्रभावमा हुनुहुन्छ भने यसले तपाईंको एकाग्रता बढाउन सक्छ। तपाइँ यो प्रयोगको साथ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
क्याफिन प्रयोगले टाइप गतिमा असर गर्दैन ।
क्याफिन एकाग्रतालाई असर गर्दैन।
विद्यार्थी अनुरूप अनुभवहरू
Caiaimage / सैम एडवर्ड्स / Getty Images
यदि तपाइँ विद्यार्थीहरूको ठूलो समूहमा हुनुहुन्छ र प्रशिक्षक कक्षा997के छ भनेर सोध्छन्। एक विद्यार्थी भन्छन् यो 54 हो। त्यसैले अर्को गर्छ। के तपाईं आफ्नो जवाफ 63 को पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ? हामी हाम्रो वरपरका मानिसहरूको विश्वासले प्रभाव पारेको छ र कहिलेकाहीँ समूहले विश्वास गरेको कुरा अनुरूप। तपाईले डिग्री अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ जसमा सामाजिक दबाब अनुरूप हुन्छ।
विद्यार्थीहरूको संख्या विद्यार्थी अनुरूपतामा असर पर्दैन।
उमेरले विद्यार्थी अनुरूपतालाई असर गर्दैन।
लिङ्ग विद्यार्थी अनुरूपतामा कुनै असर पर्दैन।
धुम्रपान बम अनुभवहरू
Georgi Fadejev / EyeEm / Getty Images
धुलो बम सबै उमेरका बच्चाहरूको लागि रमाइलो हुन्छ तर शायद उच्च विद्यालयको स्तर भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि उपयुक्त प्रयोग विषयहरू होइनन्। धुलो बमहरूले दहनको बारेमा सिक्न एक रोचक तरिका प्रदान गर्दछ। तिनीहरू पनि रॉकेटहरूमा प्रोपेलेंटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
धुआँ बम सामग्री को अनुपात उत्पादन गरिएको धूम्रपान को मात्रा मा असर नहीं गर्नेछन्।
अवयवहरूको अनुपात धुआं बम राकेटको दायरालाई असर पार्दैन।
हात संवेदक अनुभवहरू
ह्यान्ड सन्यान्डरलाई तपाईंको हातमा नियन्त्रणमा राखिएको कोटाणु राख्नु पर्छ। तपाईं संस्कृति ब्याक्टीरियालाई हेर्न सक्नु हुन्छ कि हस्त सान्दर्भिक प्रभावकारी छ। तपाईं एक फरक काम अर्को भन्दा राम्रो छ कि हेर्न को लागी विभिन्न प्रकारका ह्यान्ड नागरिकको तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं प्रभावकारी स्वाभाविक हात हानिकारक बनाउन सक्नुहुन्छ? के हात स्वच्छता biodegradable छ?
विभिन्न हात प्रवासीहरूको प्रभावकारितामा कुनै फरक छैन।
हात सान्दर्भिक बायोड्रोग्रेड योग्य छ।
घरको हात हानिकारक र व्यावसायिक हात सचेतनाको बीच प्रभावकारीतामा कुनै फरक छैन।
किनेटिक रेत नुस्खा
तपाईं पानीबाट नमक कसरी हटाउनुहुन्छ?
बालवालिका विज्ञान परियोजनाहरू
बैजनी वा बैंगनी आगो कसरी बनाउने
दूधबाट गैर विषाक्त ग्लु कसरी बनाउने?
क्रिस्टल जियोड कसरी गर्ने
विज्ञान मेला परियोजना विचार
बोरक्स क्रिस्टल स्टार कसरी वृद्धि गर्ने?
विज्ञान जादू ट्रिक्स
हराएको पीढी र लेखकहरूले आफ्नो संसारको वर्णन गरे
मगमा वर्क्स लावा: यो कसरी मेल खान्छ, उगाइन्छ, र भेला हुन्छ
सिङ्क बग, परिवार Pentatomidae
प्रायः प्रायः सबै-एनेस्थेसिया भिडियोहरूको 15
प्रजाति प्रोफाइल: गोलाकार गार
रङलिंग कला र डिजाइन एडमिशनको कलेज
12 जे जे जे चेलाहरूलाई तपाईंले थाहा पाउनुपर्छ
यसलाई पकाउने पछि कच्चा माछा सफाई र तयारी गर्ने एक गाइड
Italian Verbs Beginners for
आधुनिक मेजर जनरल गीत
मेक्सिकोको स्वतन्त्रताको प्रमुख स्पेन स्पेन बाट
अन्तिम समय लगातार डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपर्स थिए
De Profundis - भजन 130 (वा 129)
कोलगेट विश्वविद्यालय जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
काममा सतत शिक्षा - यो तपाईंको लागि के हो?
हैरी पोटरको प्रयोग गरी जर्मन सिक्न
बुध MESSENGER को अंतिम प्लंज
माथिल्लो अभ्यास प्रविधि पूल कसरी गर्ने?
बच्चाहरु को लागि ठूलो कारण बर्फ स्केटिंग शुरू गर्न
10 सबैभन्दा लोकप्रिय आविष्कारकहरू